राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन काँग्रेस तयार - clickpati.com
राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन काँग्रेस तयार
May 21, 2021 ashishLeaveaComment on राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन काँग्रेस तयार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन तयार भएको छ । बुढानिलकण्ठ सभापति देउवा निवासमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा महाअभियोगबारे छलफल भएको र कांग्रेस त्यसका लागि तयार रहेको बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको भावना र मर्मविपरित काम गरेको भन्दै आज साँझ ५ बजेअघिनै सबै विकल्प प्रयोग गरेर यो प्रवृतिलाई परास्त गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समयसिमा ५ बजे अघि नै केही न केही उपाय निकाल्ने र त्यसका लायि अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताईएको छ ।
महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्रीः काँग्रेस – माओवादीको साथ !
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने चासो सर्वत्र चलेको छ ।
काँग्रेस माओवादीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न लामोसमय देखि प्रयास गरेपनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले साथ नदिदा यसअघि पटक पटक नयाँ सरकार गठन गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गरेसँगै अब नेपाली राजनीतिमा दुई विकल्प छन्, कि वैकल्पिक सरकार, कि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा संसद विघटन गरी मध्यावधी चुनाव ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधी चुनाव चाहेपनि अन्य दलहरु वर्तमान परिस्थितीमा मध्यावधी चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । जसको कारण वर्तमान सरकार र राष्ट्रपतिबाट संविधानको चिरहरण भइरहेको भन्दै ओलीलाई हटाउनै पर्ने विपक्षीको भनाई छ । तर, मुख्य हलो अडकाएको जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले हो । किनकी उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले नयाँ सरकारको लागिको साथ दिने भनिसकेको छ ।
जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लौरो टेकाएरै भएपनि नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । संविधान बचाउने हो भने अहिले ओली सरकारलाई फाल्नै पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सबैको चासो ‘महन्थ ठाकुर‘
यतिबेला सबैको चासो जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरमाथि रहेको छ । तर सबैले चासो दिदै उनले राजनीतिक निकास दिन भने असफल सिद्ध भएका छन् । उनले चाहेको भए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न धेरै पहिले नै सक्ने थिए ।
पार्टीलाई एक बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन काँग्रेस र माओवादीलाई आग्रह गरेको खण्डमा उनलाई स्वीकार गर्ने प्रशस्त आधारहरु थिए ।
नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै महन्थलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार देखिएका छन् । काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि सबै बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि जसको नेतृत्वमा भएपनि वैकल्पिक सरकार बनाउनमा जोड दिन्छ । माओवादीका एक नेताले ज्योतिन्यूजसँग भने– ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको वर्तमा ओली सरकारलाई हटाउने र नयाँ वैकल्पिक सरकार बनाउने नै हो । यसमा जसले नेतृत्व गर्दा पनि हुन्छ, तर ओली सत्ताबाट बाहिरै हुनुपर्छ, ओलीकै कारण देश बर्बादीमा जाने भो, संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान नै अपहरणमा पर्ने भो !’
उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली काँग्रेसका सभापनि देखि जसपाका कुनै पनि अध्यक्षलाई स्वीकार गर्न सकिने र यसमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण सहमति रहने बताए ।
हामी निकास दिन्छौँ– ठाकुर
लामो समय ओलीलाई मौन साथ दिदै आएका अध्यक्ष ठाकुर केहीबेर अघि मुख खोलेका छन् । सिंहदरबारमा आफू पक्षिय सांसदहरुसँग छलफल गर्नुअघि सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ठाकुरले आफ्नो दलले निकास दिने दाबी गरेका हुन्।
उनले भने, ‘हामी निकास दिन्छौँ।’
ठाकुरले मध्यान्ह १२ बजे अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुसँग छलफल हुने पनि जानकारी दिए।
अध्यक्षद्वय यादव र ठाकुरले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था आए मात्रै सरकारमा जाने निर्णय पार्टीले गरेको भन्दै संयुक्त वक्तव्य केही दिनअघि मात्रै जारी गरेका थिए।
नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक अहिले बसिरहेको छ । बैठकमा महन्थको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसको लागि काँग्रेस र माओवादीसँग सहयोग माग्ने निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
महन्थलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न जसपाको अर्काे खेमा उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष पनि तयार छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्न सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेस र माओवादीसँग आग्रह गर्ने आज बस्ने जसपाको संसदीय दलको निर्णय हुनेछ । काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएर महन्थ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना निकै प्रबल रहेको छ । त्यतिमात्र नभएर गयराती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा साथ दिन आग्रह गरेको कारण सहमति हुन भने सकेको छैन ।
त्यसैले ओलीसँग नभए काँग्रेस माओवादीसँग सहयोग माग्ने जसपाले तयारी गरेको हो । यदि यो सम्भव भएमा मधेसीको छोरो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको लर्को
May 23, 2021 ashish
तल्लो तहसम्मै सहकार्य गर्ने विपक्षी गठबन्धनको सहमति
आफु बाहेकको सरकार बनाएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको ठाडो चुनौती
May 21, 2021 ashish